● Ukuthobela kunye ISO 9001: 2008 umgangatho, nathi anikele inkonzo OEM for brand ezaziwayo-kakuhle kwihlabathi kunye neenkampani ezaziwayo yorhwebo China. Mbhobho yethu irabha ezisasazwa ezithengiswa imboni yasekhaya kwemigodi, ushishino petrochemical, ishishini amalahle, kwaye icandelo umatshini hydraulic. I-70% iirubber oya kumanzisa lithunyelwa kwiimarike zamazwe ngamazwe, kuqukwa eYurophu, eMntla Melika, Umzantsi Melika, Afrika, amazwe Middle-mpuma, mpuma Asia njl
● Sizabalazela ukuba anikele amava ukuthenga kakhulu. Impendulo inokusityeda, Obusemagqabini ubunjani, ukunikezelwa ngexesha, amaxabiso elungileyo, yaye zobungcali iinkonzo emva-ukuthengiswa. Sijonge phambili intsebenziswano yakho.
Hydraulic Flexible Hose, Ngerabha fracturing Hose, fracturing Hose Assembly , fracturing Hose , Sae 100 R14 fracturing Hose ,